USipho Ndaba: UMhleli wemicimbi esoqphelweni eliphezulu | isiZulu
USipho Ndaba: UMhleli wemicimbi esoqphelweni eliphezulu
Ushukumise inkundla ePort Shepstone uSomnandi eshaya ingoma
IZITHOMBE: Imicimbi yesintu eShowe naseMpangeni
Isamisiwe imicimbi kaMaskandi eThekwini
eThekwini - USipho Ndaba unguMgqondisi-Jikelele wenkampani i-Mbawula Investments, okuyiyona ehlela imicimbi iLast Dance Music Festival (eseRichards Bay kusukela ngomhlaka 30 kwephezulu) kanye neDrakensberg Extravaganza (ebingeyokuqala kulo nyaka eBergville ngomhlaka 25 Okthoba).
Lo somabhizinisi udabuka eBergville wenza izifundo zobunjiniyela enyuvesi yaseMangosuthu.
UNdaba unesipiliyoni esihle kakhulu kwezemisebenzi njengoba ekewasebenza njenge-Sales Rep enkampanini iBavaria Breweries, ngaphambi kokuba aphume isinxele ethola amathuba amahle okuzisebenza.
Lo somabhizinisi wayesebenza ukudiliva utshwala kanye nonemenadi ezitolo ezisemalokishini ebona ukuthi maningi amathuba omsebenzi kule mboni kodwa bancane abakwenzayo.
Lokhu akubanga lula njengoba eveza ukuthi izingqinamba ezinkulu ayebhekana nazo kwakungukungabibikho kahle kwenzuzo, kanti nezokuphepha zingaqinisekisiwe kahle.
Washiya leli bhizinisi wangena embonini yokumaketha nakhona ebona amathuba amahle okuhlela imicimbi eseqophelweni eliphezulu.
UNdaba watshala imali engango-R1.2 million nge-sound system esoqophelweni eliphuzulu, eyiqashisela izinkampani ezinkulu kanye neminyango kahulumeni.
Kule mboni, uNdaba wabona kunamathuba amaningi wokukhula nokuyilapho aqala khona ukuhlela umcimbi wokuphela konyaka endaweni yaseRichards Bay.
Ukuxhumana kwakhe noMasipala wesiFunda sasoThungulu (iKing Cetshwayo) ngonyaka ka-2010 ngesicelo sokuhlela umcimbi owaziwa ngeLast Dance Music Festival kwaba yimpumelelo nkengoba lo mcimbi ususeminyakeni eyisishiyagalombili kulo nyaka.
OLUNYE UDABA:NGIYIMBOKODO: UMbali Nkomonde
Lo mcimbi uthatha izinsuku ezintathu, kusukela ngomhaka 30 Disemba kuya kumhlaka 1 Januwari lapho kuyaye kube nezinhlelo ezahlukahlukene ukuthokozisa izinkulungwane zabantu abathanda ubumnandi nabafuna ukuzithokozisa ekupheleni konyaka eRichards Bay namaphethelo.
Ngale kokuhlela imicimbi uNdaba unezinye izinhlelo azihlelayo zokuthuthukisa umphakathi njengohlelo lwaziwa nge-Back-to-School Campaign.
Ngalolu hlelo, uNdaba uhambela izindawo ezahlukahlukene enikela ngemifaniswano kanye nezicathulo zezikole kubafundi, asize labo abangakwazi ukukhokhela imfundo ephakeme. Balinganiselwa ku-5000 abafundi abasize ngemifaniswano yesikole kanti bangu-50 abafunda emanyuvesi.
Ngokusho kwakhe, uNdaba uthi uyathanda ukubambisana nezinkampani ezisafufusa ikakhulukazi lezi ezisemakhaya nalezi ezisebenza ngaphandle kokuthola inzuzo ngenhloso yokuletha intuthuku kubantu.
Eminye imicimbi kanye nezinhlelo azihlelayo ngaphansi kwenkampani yakhe kubawa i-King’s Experience Tourism Campaign, Port Festival (Transnet National Ports Authority), DOC International Conference (WTSA and WCIT), kanye neNngqwele kaMaskandi (Isolezwe).
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngalo somabhizinisi, xhumana naye ezinkundleni zokuxhumana Sipho Ndaba.